Sawiro- Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar oo Muqdisho aas qaran loogu sameeyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSawiro- Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar oo Muqdisho aas qaran loogu sameeyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Meydka Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar ayaa maanta oo Khamiis ah lagu aasay xarunta wasaarada gaashaandhiga Soomaaliya ee Muqdisho.
Munaasabada aaska qaran ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiin dowlada federaalka kamid ah oo ay kamid ahaayeen madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud, raysulwasaare, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari, iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Kahor inta aan la aasin, saraakiil dowlada katirsan iyo dad shacab ah ayaa salaada janaasada meydka marxuumka ku tugaday.
Kadib burburkii markii uu dhacay Maxamed Cali Samatar ayaa u cararay dalka Talyaaniga kadibna waxa uu uga guuray gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed Cali Samatar, ayaa lagu xasuustaa doorkii uu ku lahaa dhismaha ciidamada Soomaaliya xilligii dowladii kacaanka, ciidamada Soomaaliya oo tiradooda lagu qiyaasi jiray ilaa iyo 50,000 ayaa kamid ahaa ciidamada ugu qalabka iyo tababarka fiican qaarada Afrika.
Maxamed Cali Samatar, ayaa gaaray darajada ciidamada Soomaaliya ugu saraysa oo ah “Sareeye Guud”.
Xuquuqda Sawirada waxaa leh, Dr. Cabdiqani Shiikh Cumar, agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlada federaalka Soomaaliya.